Maitiro ekuVimba neKutenga Kwemaitiro Kuchinja | Martech Zone
Maitiro ekuVimba neKutenga Kwemaitiro kuri Kuchinja
China, August 28, 2014 Wednesday, April 13, 2016 Douglas Karr
Mukati memakore mashoma apfuura, maitiro ekutenga epamhepo akachinja zvakanyanya online. Kuva nenzvimbo yaunovimba inoenderera mberi iri nyaya yakakosha inobatanidzwa mune chero chiitiko uye nekudaro vatengi vaida kutenga kubva kune chete masaiti avanogona kuvimba. Kuvimba uku kwakaratidzirwa kuburikidza nezvitupa zvechitatu bato, online ongororo, kana kunyangwe nzvimbo yemunharaunda yekutengesa. Sezvo kutengeserana kuri kuenderera mberi kuenda online, zvakadaro. 40% yevashandisi veInternet pasirese - vanopfuura bhirioni vashandisi - vakatenga online. Imwe kiyi yekuvimba inogona kuve yekubhadhara pasuwo.
Suo rekubhadhara rakavimbika senge PayPal, uko mutengi paanogona kutora mukutengesa kwekunyepedzera, anogona kuwedzera shanduko pane yako ecommerce saiti. Sezvo PayPal iri yepasi rese, iri kuwedzerawo kuvimba kwevatengi kuita bhizinesi pasi rese.
Mune ongororo ichangobva kuitwa, Forrester Research Inc.ibvunze UK Online Vatengi nezve zvakaitika kwavari. Mhedzisiro yacho inoratidza kuti kupa PayPal seyokutora sarudzo kunovaka kuvimba, uye kunoonekwa nekukurumidza uye nyore. Izvo zvinoita kuti kutengeserana kuve nyore!
ichi infographic kubva kuPayPal inopa nzwisiso mukuwedzera kwekuti vatengi vari kutenga kubva kupi, iwo masosi avanotenga pairi, uye izvo zvinhu zvinokanganisa kutendeuka kwehuwandu pamhepo sekumhanyisa, nyore uye nzira yekubhadhara yakavimbika.
Tags: 2013 ecommerce ongororoecommerceecommerce infographicecommerce kuvimbaforrester kutsvagisakutengesa pamhepokubhadhara infographickubhadhara kubhadharatekinoroji yekubhadharapaypalstatistakuvimbauk
Ngwarira nezveVashanyi Mapositi
Kuteerera Hazvikwani. Yako Yemagariro Isu Inoda izvi zvina Zvinhu Zvekubudirira!